Progressive Voice Myanmar » မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ကရင်ပြည်နယ် အပစ်ရပ်နယ်မြေအတွင်း လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော တင်းမာမှုနှင့် ပဋိပက္ခစစ်ပွဲများ၊ စစ်ဘေးဒဏ် ခံနေရသော ဒေသခံပြည်သူလူထုများနှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း များ၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။
Home Resources Statements မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်�...
Statement 534 Views
January 20th, 2021 • Author: 172 Civil Society Organizations , (Progressive Voice) •4minute read
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ကရင်ပြည်နယ် အပစ်ရပ်နယ်မြေအတွင်း လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသော တင်းမာမှုနှင့် ပဋိပက္ခစစ်ပွဲများ၊ စစ်ဘေးဒဏ် ခံနေရသော ဒေသခံပြည်သူလူထုများနှင့်ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်း များ၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ။
လေးစားအပ်ပါသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန၏ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ဗျား/ရှင့်
အထက်ပါ အကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (Karen National Union – KNU) ၏ လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (Karen National Liberation Army – KNLA) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား လတ်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော စစ်ရေးတင်းမာမှုနှင့် ဖာပွန်ခရိုင်၊ သထုံခရိုင်နှင့်‌ ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်း လက်ရှိအရှိန်မြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ထိပ်တိုက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဒေသခံပြည်သူလူထု ၄,၀၀၀ ခန့်သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဖြစ်ပေါ်ချိန် စိန်ခေါ်မှုများနေသည့်ကာလမျိုးတွင် ၎င်းတို့၏အိုးအိမ်များကို စွန့်ခွာပြီး နီးစပ်ရာ‌ဒေသများသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသည့်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြီးစွာဖြင့် ထိုတင်းမာမှုနှင့် တိုက်ပွဲပြဿနာများကို အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အောက်ပါလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မိမိတို့ အရပ်ဘက်လူထု အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကွန်ရက် (၁၇၂) ဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများထံ လေးစားစွာ တင်ပြတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) ပါ သ‌ဘောတူညီချက်များကို လျစ်လျူရှုလျက် KNU ၏ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်းရှိ ဖာပွန်ခရိုင်နှင့် အခြားဒေသများတွင် တပ်အင်အား တိုးချဲ့မှုများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ဆောင်လာသဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် KNU တို့အကြား တင်းမာမှုများ တိုးမြင့်လာပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းရှိ မဲ၀ယ်‌စခန်း အခြေစိုက် မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်သားများ၏ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် လုံခြုံရေးယူထားသည့် KNU လက်အောက်ခံ KNLA တပ်ရင်းနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ထိပ်တိုက်ပစ်ခတ်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ထိုသို့ ပစ်ခတ်ရာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရွာတွင်းနှင့် ရွာပြင်ပနေရာများအပါအဝင် ပြည်သူလူထုများ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်း လုပ်ကိုင်သည့်‌ နေရာဒေသများကိုပါ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့သဖြင့် ‌ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းရှိ အပြစ်မဲ့ ဒေသခံပြည်သူလူထု ၃,၀၀၀ ကျော် ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ခလရ ၄၀၄ မှ ဖာပွန်ခရိုင်၊ မဲချိုကျေးရွာအုပ်စုသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ရွာသူကြီးတစ်ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ ထိုမျှမကသေး ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ဖာပွန်ခရိုင်၊ မဲဝယ်ကျေးရွာအတွင်းသို့ မြန်မာ့တပ်မတော် ခမရ ၃၃၉ မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဆက်လက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် (ကျား) တစ်ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှု ခံယူနေရသည်။ ထိုသေဆုံး ထိခိုက်ရမှုများအတွက် တရားမျှတမှု ‌ဖော်ဆောင်ပေးရန်နှင့် ၎င်းကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုး နောက်နောင် ထပ်မံ မဖြစ်ပွားစေရေး အာမခံပေးရန် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါသည်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ နှစ်ဘက်ကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ယုံကြည်မှု လျော့နည်းခြင်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး တင်းမာမှုအခြေအနေ မြင့်တက်လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် NCA ပါ သဘောတူညီချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်း စစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုများ မရပ်တန့်သ၍ နှစ်ဘက်ကြား တင်းမာမှုနှင့် တိုက်ပွဲများ အဆုံးသတ်ရန် ခဲရင်းမည်ဟု မိမိတို့အနေဖြင့် သုံးသပ်မိပါသည်။
ထိုမျှသာမက အပစ်ရပ်နယ်မြေ ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရှိ သတ်မှတ်နယ်မြေအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ၀င်‌ရောက်လှုပ်ရှားနေမှုကြောင့် KNU ၏ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့မှစတင်၍ ယနေ့အချိန်အထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် ပစ်ခတ် တိုက်ခတ်မှုများကြောင့် ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၇၉၀ ဦး ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်။ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ခမရ ၆၀၃ မှ ကျေးရွာအတွင်းသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ပယ်ကောခီးကျေးရွာ နေထိုင်သူ အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ဖာပွန်ခရိုင်နှင့် ညောင်လေးပင်ခရိုင်တို့အပြင် အခြားသော KNU ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေများအတွင်း စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုများ ပိုမို လုပ်ဆောင်နေလျက် ရှိသောကြောင့် ဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲများ ကျယ်ပြန့်ပြင်းထန်လာမည်ကို ပြည်သူများက အထူးစိုးရိမ်ပူပန် နေကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ရေရှည် တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ကာလတွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ဆက်လက်၍ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရမှုအပေါ် မိမိတို့မှ အထူးပင် စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။
NCA အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် KNU နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ယင်းကဲ့သို့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းခံကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်မှ စီမံကိန်းများအပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ NCA ကို ချိုးဖောက်သည့် နယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုနှင့် စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ တင်းမာမှုနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးအား ရှေ့ရှုကာ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဤသို့ NCA ကို ချိုးဖောက်၍ စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုများ၊ KNU နယ်မြေအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများ ရုပ်သိမ်းစေရေး အပါအဝင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် လူသောမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ ၁၂ ရွာမှ ဒေသခံရွာသား ၁၀,၀၀၀ ကျော်ခန့် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုထားသည့် အခြားသောအချက်များကိုလည်း ပြည်သူ့အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မိမိတို့မှ ထပ်ဆင့်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါသည်။
မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းစစ်မီး တောက်လောင်နေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ မိမိတို့ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး လိုလားတောင့်တနေသည့် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကို အသုံးပြု၍ ယခုကဲ့သို့ စစ်အင်အားသုံး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှုများသည် သင့်လျော်မှု မရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လည်း ပိုမိုဝေးကွာစေသည်ဟု မိမိတို့မှ သုံးသပ်ပါသည်။
ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခံရမှုများအပါအဝင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် အခြားသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုများကို ပိုမိုခံစားရလေ့ရှိသည်။ မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများအားလုံး ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) နှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (Convention on the Rights of Child – CRC) အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် ၎င်းစာချုပ်များပါ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အ‌ရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသား‌ဒေသများ၌ ဖြစ်ပွားနေသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနှင့် ၎င်း၏ အကြောင်းရင်းခံများသည် နိုင်ငံရေးပြဿာနာများဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်သာ အဖြေရှာသင့် သည်ဟု မိမိတို့မှ ယုံကြည်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများနှင့် နည်းလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးရန် နှင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများအား စစ်ဆင်ရေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အင်အားတိုးချဲ့နေရာယူခြင်းများအားလုံး ရုပ်သိမ်း ရပ်တန့်စေရေးတို့အား အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အောက်ပါလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မိမိတို့ အရပ်ဘက်လူထု အဖွဲ့အစည်းများမှ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
172. Kawyaw National Youth Organization (KyNYO)